ကြောခိုငျးလိုကျတယျဆိုတာ မုနျးသှားလို့မှမဟုတျတာ – Shinyoon
ပေါငျးဖကျကွတယျဆိုတိုငျး အရမျးခဈြလို့ခညျြးမဟုတျသလို ကြောခိုငျးသှားတယျဆိုတိုငျး မုနျးသှားလို့ မဟုတျပါဘူး
အေးစကျသှားတဲ့ ဆကျဆံရေးကို ပွနျပွီးနှေးထှေးလာအောငျ မလုပျနိုငျတော့ဘူးလို့ ယုံကွညျသှားခဲ့မိလို့ပါ တတျနိုငျတာထကျပိုပွီး ကွိုးစားခဲ့သလို ပေးနိုငျတာတှထေကျလဲ ပိုပေးခဲ့တာပဲလေ
မထိုကျတနျလို့ ရမလာခဲ့တာပဲနမှောဆိုပွီး ဆုံးဖွတျခကျြတှခေဈြလိုကျဖို့ ဘယျလောကျ နာကငျြခဲ့ရလဲဆိုတာ နညျးနညျးလေးမြား ရိပျမိခဲ့ဖူးလား ကိုယျတတျနိုငျသမြှ ဆကျပွီးဆှဲထားဖို့လဲ ကွိုးစားခဲ့ဖူးပါတယျ နောကျဆုံးလှညျ့မထှကျခငျအထိ မြှျောလငျ့ခဲ့မိတာပါ
ဝနျခံပါတယျ သိပျခဈြတယျဆိုတာထကျလဲပိုပါတယျ . . . ပေါငျးဖကျရဖို့ဆိုတာကလဲ ကိုယျအမွဲတစေ တောငျးခဲ့ဖူးတဲ့ ဆုတဈခုပါ ဘယျလောကျပဲ လိုခငျြ လိုခငျြ ရမလာတတျတဲ့ လောကကွီးမှာ ဆကျပွီးမမြှျောလငျ့တော့ဖို့ ဒဏျရာဒဏျခကျြ ဘယျလောကျမြားခဲ့သလဲဆိုတာ စာနာခဲ့ဖူးရဲ့လား
ကိုယျ အေးစကျသှားခဲ့တာကိုပဲ မွငျတာပါ တိတျဆိတျနတေဲ့ ဆကျဆံရေးတဈခုမှ အခြိနျဘယျလောကျကွာကွာ အသကျမဲ့ခဲ့ဖူးသလဲ ဘယျသူမှ မသိပါဘူး မိနျးကလေးတဈယောကျပါ
တဈယောကျတညျးကိုပဲခဈြပွီး အဲ့ဒီခဈြတဲ့သူကိုပဲ ပေါငျးဖကျခငျြကွတာ မိနျးကလေးတိုငျးရဲ့ စိတျကူးပဲ ကြှနျမလဲ စိတျကူးတှေ ယဉျခဲ့ဖူးတဲ့ မိနျးကလေးတဈဦးပါပဲ
ကံအကွောငျးမလှလို့ ဝေးရတယျလို့ပဲမှတျပါတယျ ဘယျအပွဈမြိုးမှ ထုတျပွီး မပွောတော့ဘူး ကြှနျမပဲ မှားတယျ ကြှနျမပဲ ရကျစကျတယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြတှလေဲ လကေုနျခံပွီး မရှငျးပွတော့ဘူး
တဈနေ့ တကယျ ခဈြတတျလာတဲ့တဈနရေ့ောကျရငျ ကြှနျမ ဘယျလောကျခဈြခဲ့ဖူးလဲ စာနာပါလိမျ့မယျ ပွီးတော့ ဘယျလောကျပငျပနျးခဲ့လဲ နားလညျလာပါလိမျ့မယျ
မုနျးလို့ လကျပွ နှုတျဆကျလိုကျတာမှ မဟုတျတာ ဆကျပွီး နာကငျြနဖေို့ ခံနိုငျရညျအားမရှိတော့တာ . . . သိက်ခာတှေ ကုနျတဲ့အထိ ခဈြခဲ့ပွီးသလို မာနတှေ မကနျြတော့တဲ့အထိ အနားနားနခေဲ့ပွီးပွီလေ
ဝဋျကွှေးဆိုလဲ ကလြေောကျပွီလို့ ထငျပါတယျ ဆကျပွီး စောငျ့နေ မြှျောလငျ့နဖေို့ နောကျထပျအငျအားတှေ ကြှနျမမှာ မရှိတော့လို့ ကြှနျမ လှညျ့ထှကျခဲ့တာပါ ရှငျလဲ ပြျောပါစပေေါ့ ကြှနျမလဲ လှတျလပျပါစဆေိုတဲ့ ဆန်ဒတဈခုပဲ ရှိတာပါ ။
ပေါငျးဖကျကွတယျဆိုတိုငျး ခဈြကွလိုမှ မဟုတျတာ အဲ့လိုပါပဲ ဝေးသှားကွတယျဆိုတိုငျးလဲ မုနျးသှားလို့မှ မဟုတျတာ အပွုံးလေးနဲ့ပဲ ဒိတိုငျးလေး ဝေးသှားရုံပါပဲ ဘာအပွဈဘာအနာအဆာမှ မဖှဲ့လိုပါဘူး ကြှနျမသာ ခံနိုငျရညျမရှိတော့တာပါ
ကိုယျသိပျခဈြခဲ့တဲ့လူကို သိပျမုနျးသှားမှာထကျစာရငျ ဒီတိုငျးလေး ဝေးသှားတာက ပိုကောငျးပါတယျ ။
ပေါင်းဖက်ကြတယ်ဆိုတိုင်း အရမ်းချစ်လို့ချည်းမဟုတ်သလို ကျောခိုင်းသွားတယ်ဆိုတိုင်း မုန်းသွားလို့ မဟုတ်ပါဘူး
အေးစက်သွားတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပြန်ပြီးနွေးထွေးလာအောင် မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ယုံကြည်သွားခဲ့မိလို့ပါ တတ်နိုင်တာထက်ပိုပြီး ကြိုးစားခဲ့သလို ပေးနိုင်တာတွေထက်လဲ ပိုပေးခဲ့တာပဲလေ
မထိုက်တန်လို့ ရမလာခဲ့တာပဲနေမှာဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချစ်လိုက်ဖို့ ဘယ်လောက် နာကျင်ခဲ့ရလဲဆိုတာ နည်းနည်းလေးများ ရိပ်မိခဲ့ဖူးလား ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ ဆက်ပြီးဆွဲထားဖို့လဲ ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါတယ် နောက်ဆုံးလှည့်မထွက်ခင်အထိ မျှော်လင့်ခဲ့မိတာပါ
၀န်ခံပါတယ် သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတာထက်လဲပိုပါတယ် . . . ပေါင်းဖက်ရဖို့ဆိုတာကလဲ ကိုယ်အမြဲတစေ တောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ ဆုတစ်ခုပါ ဘယ်လောက်ပဲ လိုချင် လိုချင် ရမလာတတ်တဲ့ လောကကြီးမှာ ဆက်ပြီးမမျှော်လင့်တော့ဖို့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် ဘယ်လောက်များခဲ့သလဲဆိုတာ စာနာခဲ့ဖူးရဲ့လား
ကိုယ် အေးစက်သွားခဲ့တာကိုပဲ မြင်တာပါ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသက်မဲ့ခဲ့ဖူးသလဲ ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ
တစ်ယောက်တည်းကိုပဲချစ်ပြီး အဲ့ဒီချစ်တဲ့သူကိုပဲ ပေါင်းဖက်ချင်ကြတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူးပဲ ကျွန်မလဲ စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးပါပဲ
ကံအကြောင်းမလှလို့ ဝေးရတယ်လို့ပဲမှတ်ပါတယ် ဘယ်အပြစ်မျိုးမှ ထုတ်ပြီး မပြောတော့ဘူး ကျွန်မပဲ မှားတယ် ကျွန်မပဲ ရက်စက်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေလဲ လေကုန်ခံပြီး မရှင်းပြတော့ဘူး
တစ်နေ့ တကယ် ချစ်တတ်လာတဲ့တစ်နေ့ရောက်ရင် ကျွန်မ ဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့ဖူးလဲ စာနာပါလိမ့်မယ် ပြီးတော့ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းခဲ့လဲ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်
မုန်းလို့ လက်ပြ နှုတ်ဆက်လိုက်တာမှ မဟုတ်တာ ဆက်ပြီး နာကျင်နေဖို့ ခံနိုင်ရည်အားမရှိတော့တာ . . . သိက္ခာတွေ ကုန်တဲ့အထိ ချစ်ခဲ့ပြီးသလို မာနတွေ မကျန်တော့တဲ့အထိ အနားနားနေခဲ့ပြီးပြီလေ
၀ဋ်ကြွေးဆိုလဲ ​ကျေလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ် ဆက်ပြီး စောင့်နေ မျှော်လင့်နေဖို့ နောက်ထပ်အင်အားတွေ ကျွန်မမှာ မရှိတော့လို့ ကျွန်မ လှည့်ထွက်ခဲ့တာပါ ရှင်လဲ ပျော်ပါစေပေါ့ ကျွန်မလဲ လွတ်လပ်ပါစေဆိုတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပဲ ရှိတာပါ ။
ပေါင်းဖက်ကြတယ်ဆိုတိုင်း ချစ်ကြလိုမှ မဟုတ်တာ အဲ့လိုပါပဲ ဝေးသွားကြတယ်ဆိုတိုင်းလဲ မုန်းသွားလို့မှ မဟုတ်တာ အပြုံးလေးနဲ့ပဲ ဒိတိုင်းလေး ဝေးသွားရုံပါပဲ ဘာအပြစ်ဘာအနာအဆာမှ မဖွဲ့လိုပါဘူး ကျွန်မသာ ခံနိုင်ရည်မရှိတော့တာပါ
ကိုယ်သိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့လူကို သိပ်မုန်းသွားမှာထက်စာရင် ဒီတိုင်းလေး ဝေးသွားတာက ပိုကောင်းပါတယ် ။